कांगेसका नेता डा. भण्डारीको भाइको कार दुर्घटनामा परी निधन - सुनाखरी न्युज
कांगेसका नेता डा. भण्डारीको भाइको कार दुर्घटनामा परी निधन
Posted on: June 30, 2021 - 10:21 am
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं – नेपाली कांगेसका नेता डा. चन्द्र भण्डारीको भाइ डा शंकर भण्डारीको कार दुर्घटनामा परी मंगलबार साँझ निधन भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक तथा सहप्राध्यापक समेत रहनुभएका डा. भण्डारीको आफैले चलाएकाे कार दुर्घटनामा परी मंगलबार साँझ निधन भएको हो ।
गत बर्ष वुवाको निधन भएकाले बार्षिक पुण्य तिथीको कामका लागि बुटवल गएर काठमाडौ फर्किदै गर्दा मंगलबार नवलपरासीको चरङ्गेमा दुर्घटना भइ उहाँको निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ। दुर्घटनामा घाइते भएपछि भण्डारीलाई उपचारका लागि बुटवल लगिएको थियो। गौतमबुद्ध मुटु अस्पतालमा पुर्‍याएलगत्तै चिकित्सकले उहाँलाई मृत घोषित गरेका थिए । भण्डारीको आज बुधवार दिउसो १ बजे काठमाडौँमा अन्त्येष्टि गरिने परिवारजनले जानकारी दिएका छन् । ५० बर्षिय भण्डारीका श्रीमती, दुई छोरी र एक छोरा छन् ।
समाजशास्त्रमा विद्यावारिधी हासिल गर्नु भएका भण्डारी झण्डै डेढ दशकदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्थ्याे । उहाँ सात बर्ष त्रिचन्द्र क्याम्पसकाे सहायक क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्थ्याे भने त्रिविकाे अनुगमन निर्देशनालयकाे उप निर्देशक र परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयकाे सह परिक्षा नियन्त्रककाे जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नुभएकाे थियाे । गुल्मीस्थायी घर भएका काँग्रेस नेता भण्डारीका छ दाजुभाइ र एक बहिनी मध्ये स्वर्गीय भण्डारी सबैभन्दा कान्छो हुनुहुन्थ्यो । नेता भण्डारीका अर्का भाइ फणीन्द्र भण्डारीको पनि केही बर्ष अगाडी रहस्यमय निधन भएको थियो ।